खेम थपलियाको नयाँ पुस्तक ‘खोर’ बारे नेकपा महासचिव विप्लवले गरे यस्तो टिप्पणी — Sanchar Kendra
खेम थपलियाको नयाँ पुस्तक ‘खोर’ बारे नेकपा महासचिव विप्लवले गरे यस्तो टिप्पणी
काठमाडौं । प्रगतिशील लेखक खेम थपलियाको हालै सार्वजनिक भएको १५ ऑै पुस्तक ‘खोर’मा नेकपा महासचिव विप्लवले टिप्पणी गरेका छन् । उक्त टिप्पणीमा विप्लवले जनताको घरमा बसेर ‘खोर’ सबै पढेको बताएका छन् ।
‘पुस्तक निकै जीवन्त लाग्यो । यसले मनभित्र थुप्रै उत्सुकता मात्र पैदा मात्रै गरेन कि मेटाइदियो पनि । ‘खोर’ मा व्यक्त गरिएका घटना–प्रकृति, प्रहरी–कर्मचारी, बन्दीहरूको मनोविज्ञान, सद्भाव, अपेक्षा र सुझावले हामी ठीक ठाउँमा रहेको अनुभूति भयो ।’ महासचिव विप्लवले लेखेका छन्- ‘कमरेड खेमले लेख्नुभएजस्तै गह्रुङ्गो जिम्मेवारीबोध पनि भयो ।’
विप्लवले ‘खोर’का लागि यसरी गरेका छन् टिप्पणी, हेर्नुहोस् उनकै शब्दमा जस्ताको त्यस्तै
प्रतिक्रान्ति र प्रतिक्रियावादका विरुद्ध लेखेर लड्नु पनि एक क्रान्ति हो । खास समय बन्दुकको लडाइँ कलममा अभिव्यक्त हुन्छ । कलमको लडाइँमा नजितेर बन्दुकको लडाइँ जित्न सकिँदैन । त्यसैले क्रान्तिकारी लेखकलाई कलमको सेना पनि भनिन्छ ।
नेपालमा प्रतिक्रान्तिको हावा जोडले बगेपछि हामीले क्रान्तिको कलम उचाल्यौँ भने हाम्राविरुद्ध प्रतिक्रान्तिकारी कलम मात्र होइन; थुप्रै अवसरवादी कलमहरू पनि उज्जिए ! यो लडाइँमा कमरेड खेमले क्रान्तिको कलम दह्रोसँग उठाउनुभयो र प्रतिक्रान्ति एवम् सामाजिक दलाल पुँजीवादी विचारका विरुद्ध सङ्घर्ष छेड्नुभयो ।
कैयौँ लेखक भनिनेहरूका कलमले सरकारी तर मार्न प्रतिक्रान्ति र सामाजिक दलाल पुँजीवादी प्रवृत्तिको भक्तिगीत ओकलिरहेको समयमा कमरेड खेमले क्रान्ति, स्वाधीनता, परिवर्तन र एकीकृत जनक्रान्तिको पक्षमा मोर्चा कसेको सत्तासीनहरूलाई पचेन । त्यसमा पनि जनयुद्धका नायक भनिएका प्रचण्डहरूलाई भाउन्न भयो ! उनीहरूको आँखाले खेमको कलमलाई बन्दुकभन्दा पनि डरलाग्दो देखे र नियन्त्रणमा लिए ! उहाँले भूतपूर्व माओवादी प्रचण्ड–प्रभाकरहरूको गिरफ्तारी, हिरासत र यातना २५ दिन भोग्नुभयो ।
हिरासतले हारेपछि कमरेड खेमले पुनः आफ्नो कलम चलाउनुभयो र प्रतिक्रान्तिसँगको लडाइँस्वरूप ‘खोर’ तयार पार्नुभयो । अवसरवश कमरेड खेमले ‘खोर’ मेरा लागि पठाइदिनुभयो । मैले जनताको घरमा बसेर ‘खोर’ सबै पढेँ । पुस्तक निकै जीवन्त लाग्यो । यसले मनभित्र थुप्रै उत्सुकता मात्र पैदा मात्रै गरेन कि मेटाइदियो पनि । ‘खोर’ मा व्यक्त गरिएका घटना–प्रकृति, प्रहरी–कर्मचारी, बन्दीहरूको मनोविज्ञान, सद्भाव, अपेक्षा र सुझावले हामी ठीक ठाउँमा रहेको अनुभूति भयो । कमरेड खेमले लेख्नुभएजस्तै गह्रुङ्गो जिम्मेवारीबोध पनि भयो ।
यसबेला क्रान्ति र प्रतिक्रान्ति, वैज्ञानिक समाजवाद र दलाल पुँजीवादबीचको मोर्चा अरू तातेको छ, केन्द्रीय नेताहरूदेखि सयौँ क्रान्तिकारी कार्यकर्ताहरूलाई केपी–प्रचण्डको सामाजिक दलाल पुँजीवादी सरकारले गिरफ्तार गरेको छ । सयौँ जनालाई मुद्दा लगाइएको छ ।
कुन साथी कति बेला गिरफ्तार पर्ने हो, अपहरित र बेपत्ता हुने हो या मारिने हो, कुनै ठेगान छैन तर श्रमिक जनताको नजरमा केपी–प्रचण्डको दमन स्वीकार्य छैन, न त क्रान्तिकारीहरूमा नै कुनै चिन्ता छ ! बरु सबै क्रान्तिकारीहरूलाई यो दलाल पुँजीवादी सत्ताका विरुद्ध क्रान्ति अपरिहार्य भएको र त्यसलाई पूरा गरिछाड्ने दृढता पैदा भएको छ र प्रतिरोध सङ्घर्ष एकपछि अर्को उचाइतिर बढिरहेको छ ।
हुन सक्छ, हामीमध्ये जो कोहीले जतिखेर पनि राज्यको गिरफ्तारी र दमन पुनः भोग्नुपर्नेछ । परन्तु हामीले पकडेको वैज्ञानिक समाजवाद–सामयवादको मार्ग यति उज्यालो र महान् छ, जसको यात्रा र विजयलाई रोक्ने आजसम्म कुनै तागत नै जन्मिएको छैन । हामी त्यो मार्गमा निरन्तर अग्रसर होऔँ । कमरेड खेमले आफ्नो वैचारिक–राजनीतिक एवम् साहित्यिक सिर्जन–कार्यलाई अरू अगाडि बढाउनुस्, शुभकामना !
कारागारका डाक्टरले अवस्था गम्भीर छ भन्दा पनि प्रशासनले वेवास्ता गरिरह्यो, जब सुदर्शन ढले अनि पुर्याइयो गंगालाल
तीन बुँदे सहमित विपरित क्रान्तिकारी बाँकेका अध्यक्ष शाही गिरफ्तार, संयोजक बिकले निकाले कडा विज्ञप्ति
तीन बुँदे सहमतिमा सरकार इमान्दार नभए आँधिवेहरी आउन सक्छ- माइला लामा